Hiiraan Archives - Sawirrotv
December 21, 2016 – Waxa ay faah faahinno dheeraad ahi ay ka soo baxayaan Dagaal gaystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay Galbeedka Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan. Deegaanka dagaalka uu ka dhacay oo lagu magacaabo Caloola Cad oo qiyaastii 15-KM u jira Magaalada Baledweyne, ayaa waxa uu dagaalku u …
December 01, 2016 – Waxa ay faah faahino dheeri ah ka soo baxayaan weerar ay geysteen kooxo maanta Gudoomiyaha Degmada Jalalaqsi, Maxamed Cabdulle Fiidoow ku dhaawacay dhul kayn ah oo u dhaxeeya Jowhar iyo Jalalaqsi. Dhaawaca Gudoomiyaha ayaa yimid kadib markii ay wadada u galeen kooxo hubeysan, sidoo kalena ay Rasaas ku fureen kolonyo Gaadiid …
October 02, 2016 – Ra’isul Wasaare ku xigeenka Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cumar Carte iyo oday dhaqameedyada gobolka Hiiraan oo maalmihii la soo dhaafay kulamo xiriir ah ku lahaa magaalada Baladweyne ayaa markii danbe isku afgartay qodobo hordhac ah. Kulan dhexmaray wafdiga Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka, iyo qaar kamid ah odoyaasha dhaqanka ee gobolka …
Ciidamo iyo Dad Shacab ah oo Xalay Lagu Weeraray Magaalada Baledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan
September 25, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in 7 qof ay xalay ku dhaawacantay, kadib weerar bambaano oo lagu qaaday saldhiga ciidamada dowladda ku leeyihiin magaaladaasi. Qaraxan oo xalay fiidkii lagu qaaday goobtaasi ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay todobo ruux oo shacab iyo ciidan …
September 18, 2016 – Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah hogaamiyeyaasha Xisbiyada Mucaaradka ayaa booqasho taageero ah ku gaaray Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan, waxa ayna la kulmeen qaar ka mid ah oday dhaqameedyada ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Xubnahan booqashada ku gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxaa kamid ah Ra’iisul wasaarihii hore Cabdiweli …
Yusuf Dabageed oo Maamulka Puntland Ugu Baaqay Inay Sii Dayaan Gawaarida Xamuulka ah ee ay Haystaan (Dhagayso)
September 11, 2016 – Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar, Yuusuf Dabageed oo la hadlay warbaahinta magaalada Baladweyne ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in ay xayiraada ka qaadaan gawaarida ku xayiran deegaanada maamulka Puntland. Dabageed ayaa sheegay in maamulka Puntland aysan qaadin tilaabo ku habooneyn dadka kunool deegaanada bartamaha iyo sidoo kale deegaanada Puntland. Gudoomiyaha …